mercredi, 25 mars 2020 09:11
Coronavirus: Hisy ny « Plan d’urgence social » hanalefahana ny fiantraikan’ny fihibohan’ny olona an-trano
Tsy mafy noho ny krizy nolalovan’ny firenena toy ny tamin’ny 2002 ity valanaretina coronavirus ity, hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina raha nitafa nivantana tao amin’ny fahitalavi-pirenena ny talata 24 marsa 2020 tamin’ny 8ora alina. Tamin’io fotoana io ihany koa no nanambarany ny fanapahan-kevitra noraisin’ny fanjakana hampihatra ny « Plan d'urgence social » na Planina ara-tsosialy hanalefahana ny fiantraikan’ny fihibohan’ny olona an-trano sy ireo marefo ara-pivelomana. Anisany nambarany tamin’izany ny hisian’ny famatsiana sakafo toy ny vary, voamaina, siramamy, savony, koba aina … ho an’ireo fianakaviana tena voadona noho ny tsy fahafahana miasa manomboka amin'ny Alakamisy 26 marsa izao.
mardi, 24 mars 2020 12:03
Sambava: Zaza 13 taona maty noho ny fihinanana atsantsa, telo hafa mbola eny amin'ny hopitaly
Tovolahikely iray, 13 taona, no namoy ny ainy ny tolakandron’ny 23 marsa 2020 vokatry ny fihinanana atsantsa. Mpifanolobodirindrina aminy no nahazo atsantsa ka mba nizara dia nihinana izy. Ny alahady 22 marsa 2020 no nahazo zanaka atsantsa ireto mpanjono tao Anjiakely Kaominina Farahalana Distrika Sambava ka naroso hatramin'ny atiny nendasina ary nohanina. Tsy naharitra ora vitsy taorian'io dia efa nitaraina ho marary ny zandriny indrindra, tamin’ireo nihinana, ary nihitatra tamin'izy efa-mianaka ka avy hatrany nentina namonjy tobi-pahasalamana akaiky indrindra dia tao amin'ny CSB2 Farahalana, io alahady io tokony tamin'ny 10ora alina.
lundi, 23 mars 2020 21:15
Andry Rajoelina: « Ny ady amin’ny coronavirus aloha izao no laharampahamehana amiko »
Nivahina nivantana tao amin’ny fahitalavi-pirenena TVM ny filoha Andry Rajoelina androany alatsinainy tamin’ny 8ora hariva, nanome vaovao mikasika ny fivoaran’ny fihanaky ny coronavirus eto Madagasikara sy nampahafantatra ireo fepetra raisin’ny fitondram-panjakana hifehezana ity valanaretina ity. Nambarany fa nisy tranga 5 vaovao androany rehefa nivaly ny fitiliana natao. Hatreto izany izao dia miisa 17 ny olona mitondra ity otrikaretina Coronavirus ity eto Madagasikara, ary olona iray fiaramanidina avokoa ireo voa ireo, ary nifanakaiky toerana. Nanipika mazava ny filoha fa « tsy misy marary namoy ny ainy ». Izay no mametraka an’i Madagasikara eo amin’ny « Stade 1 » amin’ny fiatrehana ity coronavirus ity, ary anisany antony nanomezana fahalalahana ny orinasa tsy miankina handaminan’izy ireo ny asany, araka ny fanazavany.
lundi, 23 mars 2020 21:14
Coronavirus: Miato ny famangiana voafonja ataon’ny fianakavian’izy ireo
Namoaka NAOTY ny ministeran’ny Fitsarana mirakitra ireo fepetra ho raisina eny amin’ireo sampan-draharaha rehetra manerana ny Nosy, ho fisorohana ny fihanaky ny valanaretina coronavirus. Anisan’izany ny fiatoan’ny famangiana ny voafonja ataon’ny fianakavian’izy ireo. Mitohy hatrany kosa ny fanaterana ny sakafon’ny voafonja. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 23 mars 2020 20:21
Coronavirus: Nampodian’ny Polisy ireo tanora mivorivory sy mipetraka eraky ny sisin-dalana
Nidina ifotony nanentana ireo Ray aman-dreny mba tsy hitondra ny zanany hivoaka ny trano intsony ny Polisim-pirenena. Mbola betsaka ireo minia mitondra azy ireny mandehandeha eny andalam-be raha ny hita tamin’ny toerana samihafa teto Antananarivo androany. Nampodiana ihany koa ireo tanora mivorivory sy mipetraka eraky ny sisin-dalana ho fisorohana ny fianak'ity valan'aretina ity. Nampianatra ireo mpividy entana tsy hitangorona fa hanaja ny elanelana 1 metatra ny Polisy sy nanentana ireo mpivarotra ihany ko aizy ireo mba hiaro ny tenany noho izy ireo mifandray amin'ny mpividy isan-karazany. (Loharanom-baovao: Polisim-pirenena)
Tanterahina avy hatrany manomboka ny Alatsinainy 23 Martsa 2020 ny fepetra rehetra nambaran’ny Filoha Andry Rajoelina ny alin’ny alahady, ho fifehezana ny fihanaky ny valanaretina coronavirus. Androany tamin’ny 01ora maraina dia nivory ny mpikambana amin’ny OMC na Organe Mixte de Conception, izay notarihin’ny Préfet ny Toamasina sy ny Governoran’ny Faritra Atsinanana, izay mpandrindra ihany koa ny Komitim-paritry ny ady amin’ny aretina Coronavirus Voakasiky ny fepetra ny Faritra Analamanga sy ny tanànan’i Toamasina. "Ho hentitra ny fampanajàna ny fitsipika sy ny fepetra, ato Toamasina mba ho tombontsoan’ny besinimaro", hoy ny OMC Toamasina. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 23 mars 2020 12:49
Coronavirus: Ireo fepetra mihatra ho an'Antananarivo sy Toamasina manomboka ny alatsinainy 23 marsa 2020
1/ Mijanona tanteraka ny fitateram-bahoaka an-tanan-dehibe sy ny zotra Nasionaly mampifandray an'Antananarivo sy ny Faritra. 2/ Mijanona avokoa ny fitaterana Taxi-be, fiara-karetsaka na Taxi, Taxi-brousse 3/ Hatsangana ny « Barrière Sanitaire » ivelan' Antananarivo sy ny an-tanan-dehibe rehetra manerana ny Nosy. 4/ Ny toera-pivarotana Tsena-lehibe na Grande Surface, Ny Mpamongady na Grossiste, ny Tsenakely na Épicerie sy ny tsenam-pokontany (06 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro ary olona iray ihany isan-tokantrano no mahazo mientsena izay harindran'ny kaominina sy ny fokontany) ihany no misokatra.
dimanche, 22 mars 2020 17:00
Cité Canada – Toamasina: Fonosana nampisahotaka
Nahitana valonan-javatra mifono lambatsilena miloko manga tao anaty tsikafona sy fako, teo amin’ny Cité Canada-Toamasina androany maraina. Mifatotra toa faty olona voafono halevina ny fahitana azy ivelany. Nikoropaka ny olona, betsaka koa no niahiahy sao vonoan’olona niniana natao, na koa olona matin’ny valanaretina no nisy nanary. Nisy nampandre ny BMH ao amin’ny fiadidiana ny tanànan’ny Toamasina sy ny Polisy. Tonga teny an-toerana nanao fitsirihana ilay fonosan-javatra ireto farany. Efa nitangorona ny olona, te hahalala ny zava-misy marina. Niparitaka tamin’ny tambazotran-tserasera facebook rahateo ny sary.
dimanche, 22 mars 2020 16:41
Dr Razafindranazy Jean-Jacques: Teratany malagasy matin’ny coronavirus tany Lille-Frantsa
Ny zanany no nanao ny fampilazana tamin’ny tambazotra sosialy facebook, ny 21 marsa 2020, fa nodimandry ny rainy, Dr Razafindranazy Jean-Jacques, 67 taona, izay dokotera amin’ny sampana vonjy aina ao amin’ny hopitalin’i Compiègne any Frantsa. Efa telo herinandro Dr Razafindranazy Jean-Jacques no tratry ny tsy fahasalamana, voan’ny coronavirus. Vao avy niala sasatra taty Madagasikara anefa izy talohan’io namparary azy io. Nihombo ny aretiny ka nampidirina hopitaly tao Lille, dia izy nodimandry izao.
dimanche, 22 mars 2020 10:40
Coronavirus: Atao fitsirihana avokoa ireo mpandeha avy any ivelany nitodi-doha an-tanindrazana latsaky ny 14 andro
Tapaka nandritra ny Filankevitry ny Minisitra manokana ny sabotsy 21 marsa fa atao avokoa ny fitsirihana mivantana sy fanarahana akaiky isan’andro ireo mpandeha avy any ivelany nitodi-doha an-tanindrazana ka hanaovana fizaham-pahasalamana ifotony, ary hanaovana fitiliana sy fanadihadiana manokana. Voakasik’izany ireo rehetra nitodi-doha an-tanindrazana latsaky ny 14 andro rehetra tsy ankanavaka. Hisy ny fandehanana any an-tokantranon’izy ireny sy ny fandraisana ireo olona rehetra nifanerasera tamin’izy ireo nanomboka ny fahatongavany ka hatramin’ny fotoana itsidihan’ny mpitsabo sy ny mpitandro ny filaminana azy ireo.